सेवाहरू – 360 OpenPlotter
अन्तर्राष्ट्रिय 360 Photographer Agency
उच्च उडान, कहिल्यै उच्च
हाम्रो कानुनी रूपमा दर्ता drones साथ सँगै हामी तपाइँको परियोजना को अविश्वसनीय दृश्य बनाउन सक्नुहुन्छ, घटना वा स्थापना. कुनै कुरा यो तपाइँको विवाह, डुङ्गा वा भवन, पनि हवाई परिदृश्य.
हाम्रो फोटोग्राफर कम्तिमा4हजार संकल्प साथ र पूर्ण एकाग्रता मा फोटो बनाउन 360. तिनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय फिलिम र फोटोग्राफी प्रतियोगिताहरूमा आफ्नो कामको लागि सबै विजेता हो. हाम्रो 360 फोटोग्राफर गुगल विश्वसनीय छन् र तिनीहरूको रोजेको घर शहर को लुकेको क्षेत्रमा विशेष अधिकार र पहुँच. सामान्य अवस्थामा पनि चित्रहरू अपलोड गुगल पहिलो स्थान लिन. प्रत्येक फोटोग्राफर एक लाख भन्दा बढी देखिएको छ. तपाइँको व्यापार हाम्रो सिद्ध विधि र कल्पना संग र्याङ्किङ्ग Google नक्सामा पहिलो स्थान लिन सक्छ.
कानुनी उडान अधिकार & कागजी कार्रवाई
संग सरकारको र स्थानीय अधिकारीहरूले सबै तपाईंकै उत्पादन योजना नष्ट गर्न सक्नुहुन्छ. विशेष हामी उडानहरू र हवाई फोटो कुरा भने. In this example you see our Certificate of Identification of one of our registered drones in Romania. हामी स्थानीय संचालक आधारित छ. यो कागज एक एक विमान र एक विमान जस्तै अवतरण जस्तै बन्द लिन अनुमति दिन्छ. प्रत्येक सरकारी दर्ता गरिएको छ बन्द लिन र अनुमति पायो. यो कागज फिलिम वा फोटो बनाउन अनुमति छैन. यो फरक नियम र सरकारी विभागहरु अवस्थित.
अझै पनि harmonized छैन. पेनाल्टी तपाईं खर्च गर्न सक्छन् 20000 माथि जेल गर्न यूरो. हामी flightrights र कानुनी कागजात युरोप मा तपाईं को लागि संगठित. यो हाम्रो सूची मा तपाईं र तपाईंको अपरेटर सेट गर्न सम्भव पनि छ, तपाईं हाम्रो ड्रोन कानुनी उड्न सक्छ भनेर. यो मोडेल अक्सर जोडतोडले अवस्थामा टिभी निर्माण वा त्यो आफ्नै कानुनी तस्वीर उत्पादन गर्न चाहनुहुन्छ पर्यटकहरु द्वारा प्रयोग गरिन्छ. तपाईं को लागि सबै भन्दा राम्रो मोडेल छलफल हामीलाई frontto मा प्रारम्भिक सोध्न.
Idea: Zeitreise /Time Journey द्वारा Tocan-Tweezer.org